Elevator mpandeha bisikileta China an'ny orinasa tsy misy trano sy mpamatsy | Tianhongyi
Ny efitrano masinina Tianhongyi tsy dia misy mpandeha mpandeha mandray ny haitao miharo fampidirana avo lenta amin'ny rafitra fanaraha-maso microcomputer sy ny rafitra inverter, izay manatsara tanteraka ny hafainganan'ny valiny sy ny fitokisan'ny rafitra. Ny fomba fampiatoana ny fiara dia novaina, ny fampiononana ny ascenseur tsy misy efitrano dia nohatsaraina be tokoa, ary mihena ny hamafin'ny fametrahana sy ny fikojakojana ny ascenseur tsy misy efitrano. Mamaky amin'ny laoniny fa ny ascenseur dia tsy maintsy asiana efitrano milina, ary manome famoronana tonga lafatra ho an'ny toerana voafetra amin'ny tranobe maoderina. Raiso ny faritra tsara indrindra sy ny drafitra famolavolana rafitra mirindra, ary ny teknolojia fisorohana fahatairana sy tabataba mahomby hanaparitahana sy hampihenana ny fihoaram-pefy tsy ara-dalàna amin'ny fiara hahatratrarana fahanginana sy natiora. Manana fahafaha-manao ambony kokoa, mora ary azo itokisana. Mety amin'ny trano, birao, hotely, magazay fivarotana ary toerana hafa.
Hafainganana (m / s)
Haben'ny fiara anatiny (mm)
Haben'ny varavarana (mm)
Tabilao momba ny vokatra
1. Maitso sy sariaka amin'ny tontolo iainana, tsy ilaina ny efitrano milina fananganana manokana, mamonjy toerana sy vidiny.
2. Low vibration, ambany tabataba, marin-toerana ary azo itokisana.
3. Fahombiazana avo sy fitehirizana angovo.
4. Mora apetraka sy tazomina.
1. Masinina fanamafisam-peo ambony: milina fanamafisam-peo natao manokana sy novokarina ampiasaina mba ahafahana mametraka azy eo anelanelan'ny fiara ambony sy ny rindrina hoistway, ary ny kabinetra fanaraha-maso sy ny varavarana ambony rihana dia tafiditra. Ny tombony lehibe dia ny milina fanamafisam-peo sy ny limiter hafainganam-pandeha dia mitovy amin'ny an'ny ascenseur misy efitrano milina, ary ny kabinetra fanaraha-maso dia mora esorina sy tazomina; ny tena fatiantoka dia ny valin'ny valin'ny ascenseur, ny hafainganam-pandeha ary ny haavon'ny fiakarana faratampony dia voakasiky ny refin'ny ankapobeny amin'ny masinina fanamafisam-peo, ny fiasan'ny vonjy taitra maika dia sarotra sy sarotra.
2. Masinina mitaingina ambany kokoa: apetraho ao anaty lavaka ny masinina fampandehanana fiara, ary ahantony eo anelanelan'ny fiara misy ny lavaka sy ny rindrin'ny fiakarana ilay vata famonoana. Ny tombony lehibe indrindra dia ny fampitomboana ny lanjan'ny valin'ny ascenseur, ny haingam-pandeha ary ny haavon'ny fiakarana faratampony dia tsy voafetra amin'ny refy amin'ny ankapobeny ny milina fanamafisam-peo, ary mora sy mora ny fizahana vonjy taitra maika; ny fatiantoka lehibe mahazo azy dia ny milina fanamafisam-peo sy ny limiteran'ny hafainganana dia iharan'ny fihenjanana. Tsy mitovy amin'ny ascenseur tsotra io, noho izany dia tsy maintsy tanterahina ny endrika nohatsaraina.
3. apetraka eo ambonin'ilay fiara ny masinina fanamafisam-peo: apetraka eo an-tampon'ny fiara ny milina fanamafisam-peo, ary apetraka amin'ny sisin'ny fiara ny kabinetra fanaraha-maso. Amin'ity fandaminana ity dia betsaka ny isan'ireo tariby miaraka aminy.
4. Ny milina fanamafisam-peo sy ny kabinetra fanaraha-maso dia napetraka ao amin'ny habaka fanokafana eo amin'ny rindrin'ny sisin-dàlana: ny milina fanamafisam-peo sy ny kabinetra fanaraha-maso dia napetraka ao amin'ny varavarana voatokana eo amin'ny rindrin'ny sisin-tany amin'ny rihana ambony. Ny tombony lehibe azony dia ny mampiakatra ny lanjan'ny valin'ny ascenseur, ny hafainganam-pandeha ary ny haavon'ny fiakarana faratampony. Izy io dia azo ampiasana milina fanamafisam-peo sy fetra hafainganam-pandeha ampiasaina amin'ny ascenseur tsotra. Izy io koa dia mety kokoa amin'ny fametrahana sy fikolokoloana ary ny fikorontanana vonjy taitra; ny fatiantoka lehibe dia ny, Ilaina ny mampitombo tsara ny hatevin'ny rindrin'ny sisin'ny fiakarana natokana ho an'ny fisokafana amin'ny sosona ambony, ary ny varavarana fanamboarana dia tokony hapetraka ivelan'ny fisokafan'ny rindrin'ny hoistway.
Teo aloha: Azo antoka, azo itokisana ary mora ny mametraka takelaka amin'ny fidirana avo
Manaraka: Angovo mandany Buffer Hydraulika
Elevator mitaingina sy tsy mihetsika
Elevator mandoro miaraka amin'ny fampiharana midadasika ary miarahaba ...